Hlola iSao Paulo, eBrazil - World Tourism Portal
Hlola iSao Paulo, eBrazil
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eSao Paulo
Yini okufanele uyenze eSao Paulo
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weSao Paulo
Bukela ividiyo nge-Sao Paulo
Hlola iSao Paulo idolobha elikhulu kunawo Brazil, enabantu ababalelwa emadolobheni abacishe babe yizigidi ezingama-12 cishe nezigidi ze-22 esifundeni sayo sedolobha. Kuyidolobha lesifundazwe saseNingizimu-mpumalanga yeSao Paulo, futhi futhi nenqolobane yemisebenzi enikeza impilo yobusuku obuhlanya nesipiliyoni esijulile samasiko. ISão Paulo ingelinye lamadolobha acebile e-hemisphere eseningizimu, yize ukungalingani phakathi kweziqu ezivame ukubonwa eBrazil kucacile. Ngokomlando okhangayo kwabokufika kanye namaBrazilians avela kwezinye izifundazwe, kungenye yamadolobha ahlukahlukene kakhulu emhlabeni.
ISão Paulo - noma iSampa, njengoba ibizwa njalo ngokujwayelekile - nayo ingenye yamadolobha ahlakaniphile kakhulu kwezokuvakasha, okuvame ukusitshelwa ngezinye izindawo elangeni laseBrazil kanye nokujikeleza kolwandle njenge Rio de Janeiro futhi Salvador. Eqinisweni kungumuzi omkhulu ongawuhlola, onobuhlakani bawo uqobo, indlela yokuphila enhle yezakhamizi zayo, singasasho izindawo zokudlela ezisezingeni lomhlaba kanye nokudla okuhlukahlukene kwesifunda nokwamazwe angaphandle okutholakala kuzo zonke izinhlobo zokuthanda. Uma kunokukhanga okukhulu kulo muzi, yikhwalithi enhle kakhulu yezindawo zokudlela zalo kanye nemisebenzi eyahlukahlukene yesiko eboniswayo.
Eseningizimu yedolobha kukhona iParque Estadual Serra do Mar (ingxenye ye-Atlantic Forest South-East Reservation, indawo ye-UNESCO World Heritage Site), ibanga lentaba eligcwele imvula ebabazekayo ebheke ogwini futhi ihlinzeka ngezinketho ezahlukahlukene zezindawo zokuhlala kwezomnotho.
Ngemuva kokukhula okuyisimanga kweSão Paulo phakathi nekhulu le-20th, iningi lamabhilidi amadala amadala anikeze ithuba lokwakha izakhiwo zesimanje. Lokhu kusho ukuthi iningi lezakhiwo zomlando zingaphansi kwedolobha, lapho amasonto wekhulu le-17th emi emthunzini wama-skyscrapers. Izindawo ezinhle kakhulu ze-gastronomy yaseSão Paulo, impilo yasebusuku, kanye neminyuziyamu kugxilwe emlandweni wedolobha nezindawo ezingomakhelwane ezisentshonalanga. Ngenxa yalokho, kulapho izivakashi eziningi zedolobha zivame ukuhlala khona. Labo abazimisele ngokwanele ukungena ngaphesheya kwalezi zindawo bangathola iSão Paulo ehluke ngokuphelele, kufaka phakathi nezindawo zokugcina ubuhle bemvelo, izindawo ezicebile ezingomakhelwane, kanye nezifunda eziyingozi nezimpofu.
Izifunda zeSão Paulo.
Indawo okwazalelwa kuyo idolobha, enezindawo eziningi zomlando, izikhungo zamasiko, kanye nendawo yonke yabantu abahlukahlukene abagijimela emsebenzini noma esikoleni.
Ikhaya kuhulumeni wesifundazwe saseSão Paulo, cishe iyindawo edla ubhedu yedolobha ngebhizinisi, isayensi, i-gastronomy, impilo yasebusuku namasiko.
Isifunda esicebile kakhulu sedolobha siqukethe iParque do Ibirapuera, enye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokuzijabulisa namasiko eSão Paulo, nezitolo ezinkulu kakhulu zokuthenga.
Ikhaya kumakhulu ezinkulungwane zabokufika abahlala edolobheni, kulapho uMuziu do Ipiranga, iSão Paulo Zoo nezinye izinto ezikhangayo zitholakala khona.
INyakatho-mpumalanga “inkundla yemicimbi” yaseSão Paulo, lapho iCarnival yonyaka kanye neminye imicimbi eminingi emikhulu yenzeka khona. Ingxenye yeParque da Cantareira ebabazekayo nayo ilapha.
Isifunda esikhulu kunazo zonke saseSão Paulo sinezindawo ezithile ezimbozwe yihlathi, amapulazi namanzi, futhi singanikeza izivakashi izinto eziningi ezingafani nalokhu.
ICity of Workers yaseSão Paulo iqukethe amapaki amabili amahle kakhulu edolobha, futhi yayingumnikazi weNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA 2014 edolobheni.
INorthwest iyindawo engaphansi kwedolobha eyikhaya leParque Estadual do Jaraguá, lapho kutholakala khona iphuzu ledolobha eliphakeme.
I-Embu das Artes - Idolobha nje eliseNingizimu-ntshonalanga yeSao Paulo, laziwa ngabaculi bendawo abanekhono. Uma ufuna ubuciko bangempela baseBrazil, imisebenzi yezandla, ifenisha, noma nje ufuna ukubhekabheka ezitolo ezipholile ngempela, nansi indawo ongaya kuyo.
ENingizimu - INingizimu yeGreater São Paulo, eyaziwa nangokuthi yi "Great ABC" indawo, yakhiwa ngamadolobha amaningi wezimboni ahlukaniswe ngasogwini yiParque Estadual Serra do Mar, indawo enamagquma embozwe yihlathi lase-Atlantic. Indawo inikeza amathuba angenakubalwa kwezokuvakasha kwezwe.
Santo André - Idolobha eliqukethe ikhampasi enkulu yeFederal University of ABC, idolobhana lomlando weParapiapiacaba, nendawo yemvelo yegama elifanayo.
São Bernardo do Campo - Ngokomlando idolobha elixhumene nenhlangano yezabasebenzi yaseBrazil, linikeza ezokungcebeleka ezindaweni zokuzithokozisa zeBillings kanye ne-ecotourism eParque Estadual Serra do Mar, okubandakanya indlela yokuya ngasogwini.
Idolobha elikhulu elihlakazekile lingaletha izinselelo eziningi kuzinzwa. ISão Paulo iyodwa. Yize umbono wokuqala ungaba owokuhlathini kukakhonkolo ompunga, ngokushesha kuba sobala ukuthi leli dolobha linenqwaba yamaphakethe obuhle. Ubuningi bemvelo nendawo yase São Paulo yehlukene, futhi izifunda ezikuyo ziqhamuka ezindaweni zikanokusho kakhulu kuya kwezingwegwe ezihlala abantu abampofu nabampofu, ezivame ukubekelwa indawo ephansi kakhulu kwendawo ebizwa ngokuthi “isikhungo esandisiwe”.
ISão Paulo, kanye neRio de Janeiro, indawo lapho izivakashi eziningi zivela emazweni angaphandle eBrazil. Ngenkathi isipiliyoni esiphelele sedolobha singathatha amasonto ambalwa (ngoba indlela yokuphila yasePaulistanos kanye nezinqubo zansuku zonke zedolobha kukhona ezikhangayo ezinkulu ngokwazo), kungenzeka ukuthi uvakashele zonke izingosi ezinkulu kungakapheli izinsuku ezintathu. Ukuhlala isikhashana kunalokho kuhlala kungumbono omuhle. Njengesikhungo sezimali nesiko lezwe, idolobha ulwandle olunokwenzeka. Ababukeli bazodumazeka, ngoba idolobha alinaso isihehe esikhulu sabavakashi.
Idolobha linomthetho wedolobha ohlanzeke kangaka owenqabela ukukhangisa njengamabhodi. Ngokufanayo, amaloli asindayo awavunyelwe emigwaqweni eminingi ngaphandle kokuphakathi kobusuku. Lokhu kungukuthuthuka okuncane kepha okuhlala kwenzeka okwenza idolobha lihle futhi kube mnandi ukuhlala kulo.
Inkosi yaseMelika yoMdabu uTibiriçá kanye nabaphristi abangamaJesuit uJosé de Anchieta noManuel de Nóbrega basungula idolobhana laseSão Paulo de Piratininga ngomhla we-25 Januwari 1554 - Idili lokuguqulwa kukaPaul Umphostoli. Ekanye nethimba labo, abapristi basungula umishini ogama lakhe nguColégio de São Paulo de Piratininga okuhloswe ngawo ukuguqula amaTpi-Guarani omdabu aseBrazil abe yinkolo yamaKatolika. Isonto lokuqala leSão Paulo lakhiwa e1616, futhi lalikhona lapho namuhla kunePátio do Colégio.
ISão Paulo yaba idolobha ngokusemthethweni e-1711. Ngekhulu le-19th, ithole ukuchuma komnotho okuchuma, kwaletha ikakhulukazi ukuthengiswa kwekhofi, okwathunyelwa kwamanye amazwe kusuka ethekwini ledolobha elingumakhelwane iSantos. Ngemuva kwe-1881, amagagasi wezifiki Italy, IJapan, kanye namanye amazwe aseYurophu nawaseMiddle East, njengeSyria neLebanon bathuthela eSão Paulo State ngenxa yekhomishini yokukhiqiza ikhofi. Ubugqila ku Brazil yayizophela, ngakho-ke izikhuthazo zanikwa izifiki ezivela emazweni ase-Europe ezifana Italy, Germany, Lithuania, Ukraine, Poland, Portugal, futhi ESpain. Ekuqaleni kwekhulu le-20th, umjikelezo wekhofi wawusuvele wehlile ngenxa, phakathi kokunye, ukwehla okukhulu kwamanani entengo yekhofi kanye nomncintiswano ovela kwezinye izizwe. Osomabhizinisi bendawo babe sebeqala ukutshala imali ekuthuthukisweni kwezimboni kweSão Paulo, beheha abasubathi abasha abangena phesheya edolobheni. Iningi lalabo somabhizinisi kwakuyizizukulwane zase-Italy, isiPutukezi, ezesiJalimane nezaseSyria-Lebanon ezifana nemindeni yaseMatarazzo, iDiniz, neMaluf.
Isifunda saseLiberdade, eSão Paulo Downtown. Enye yezindawo zedolobha lapho ithonya labafokazi laziwa kakhulu.
Ungamangali ngokuhlukahluka kwePaulistanos. Isibonelo, iSão Paulo iyikhaya lesibalo esikhulu kunazo zonke samaJapan ngaphandle kweJapan. Akukona okujwayelekile ukubona amabhizinisi kanye namasonto aqhutshwa amaShayina namaKorea-namaBrazilians eLiberdade, ekuqaleni eyayiyisifunda sase-Italy, bese kuba yiJapan futhi njengamanje inabantu abaningi baseKorea nabaseShayina. Ithonya lomuzi wase-Italiya nalo liqinile kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni eziphakeme neziphakathi nendawo, ezinabantu abacishe babe yizigidi ezingama-6 endaweni yamadolobha amakhulu anezizinda zase-Italy. Imiphakathi emincane kodwa ephawuleka yama-Arab kanye namaJuda nayo imelelwa emazingeni aphakeme omphakathi, ukusuka kwezobuciko kuya kumabhizinisi wezezindawo, futhi ikakhulukazi kwezepolitiki. Kepha jikelele imiphakathi ephawuleka kakhulu yaseSão Paulo yi "Nordestinos", abantu abanezizinda zasenyakatho-mpumalanga noma imvelaphi, abanamasiko athile futhi banesizotha. Cishe i-40% ye- "paulistanos" inomzali oyedwa noma abazali babazukulu abaqhamuka esifundeni saseBrazil esenyakatho-mpumalanga. Akuvamile ukuthi le ngxenye ebaluleke kangaka yabantu ifinyelele ezingeni lomnotho eliphakeme noma lokuphila, ngaphandle komculo nezemidlalo ezidumile. Kuvame kakhulu ukuzwa ama-accents asenyakatho-mpumalanga emigwaqweni yaseSão Paulo, kunokuba kube nezindlela zokungena kwamanye amazwe.
Izakhamizi zaseSão Paulo zaziwa njengezisebenzi ezikhuthele nezikhuthele noma ezingabizi imali. Kujwayelekile ukuzwa ukuthi abantu baseSão Paulo basebenza ngenkathi abanye baseBrazil bephumula; noma abaningi besho lokhu, impela akulungile. Kuliqiniso, noma kunjalo, ukuthi idolobha laseSao Paulo kuphela elinomthelela ngamaphesenti ama-15 womkhiqizo wezwe lonke (amaphesenti we-45 uma izwe lonke laseSão Paulo lithathelwa ingqalelo).
Kepha lapho uPaulistanos engasebenzi, kuvame ukubambana. Ubusuku bomuzi wedolobha buqine kakhulu njengoba bufika, okwenza ukuya eklabhini kumele kwenziwe ngokuphelele. Konke kungenzeka edolobheni elingalokothi kube neqhaza.
Yize ngokwesiko kwakuyidolobha elisebenzayo hhayi izivakashi, izakhamuzi zakhona, uma zifundile kakhulu, kungenzeka ukuthi zikhuluma kangcono isiNgisi (futhi mhlawumbe iSpanish, isiNtaliyane noma isiFulentshi) kunanoma iyiphi enye indawo eBrazil. IsiNgisi ngokuvamile sikhulunywa emahhotela amakhulu nakumabhizinisi ahlobene nezivakashi, yize imenyu ngesiNgisi ingatholakali njalo. Izindawo zivame ukuba nobungane, futhi zizozama ukusiza izivakashi, kepha ubunzima bezilimi bunganikeza umgoqo. Kungumqondo omuhle ukuphrinta imishwana ethile ebalulekile.
Yini ongayithenga eSao Paulo
Ukuthi uzodlani - isiphuzo eSao Paulo
Izindawo zokuxhumana ngocingo zomphakathi zitholakala kuwo wonke amakhona. Basebenza ngamakhadi wefoni kuphela, angathengwa kunoma yiliphi iphephabhuku lephephandaba. Amakhadi wefoni avamile akuvumela ukuba wenze amakholi endawo nawezwe lonke, kepha amakhredithi awela ngesilinganiso esimangazayo uma ucingo luqondiswe kwelinye idolobha noma izingcingo ezingcolile. Kunekhadi lefoni elikhethekile lezingcingo zamazwe aphesheya, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubuza umabhalane ukuthi ungubani uma kunjalo.
Amakhebhi we-Intanethi (abizwa nangokuthi yi-cyber cafés noma izindlu ze-lan) angatholakala kalula kuyo yonke indawo eseduze.
Idolobha laseSão Paulo lihamba ngehora elilodwa nje kuphela ukusuka ePaulista Coast, okuyisifunda esijwayelekile saseBrazil esigcwele amabhishi amahle nokudla kwasolwandle okukhulu. Abancane nabadala baseSão Paulo bayakhanda ngokufanayo ngezimpelasonto ukujabulela isihlabathi, ilanga futhi kumnandi. Isimo esicebile sezolimo sinikeza izindawo zasebusika, izindlela zokuphunyuka kanye nama-Rodeos amakhulu.
ISantos (1h) - Idolobha lase-Estuary eduze neSão Paulo, ikhaya leqembu elidumile lebhola lezinyawo likaPelé Santos FC kanye Brazil'echwebeni elibaluleke kakhulu.
UGuaruja (1h) - Abaningi bePaulistanos banezindlu zabo ezisogwini kuleli dolobhana, ezigcwele abagibeli ezinyangeni zasehlobo zikaDisemba, uJanuwari nangoFebhuwari. Qaphela, yize uyindawo enhle, kungumuzi onamacala amaningi okuvela kuwo, iningi lawo lihlobene nokugqekeza, ukweba nokuphanga.
I-Bertioga (2h): i-NE yaseSantos neGuaruja, leli dolobhana lolwandle lisingatha imikhosi eyahlukahlukene yaminyaka yonke, kufaka phakathi owaseJapanese, waseNtaliyane nowaseNdiya waseBrazil. Ungaphuthelwa ukugeleza kwamanzi ngendlela eyehla intaba (nge-Moji das Cruzes), ngoba akukho ukufinyelela kuhambo lokubuyela.
ISão Sebastião (2: 30h) - Okwesibili ekukhethweni kwezindlu zasehlobo, amabhishi aseSão Sebastião ayingxube yemvelo paradisiac enempilo ngokuqala kwekilasi ebusuku. Kuqukethe elinye lamabhishi adume kakhulu ogwini lweSão Paulo, eMaresias.
Ubatuba (3h) - Amabhishi amahle ayindlela ekhanga kakhulu yale ndawo, kanye nemvelo yayo egcinwe kahle. Amahhotela kwesinye isikhathi ahlinzeka ngemisebenzi yokuzilibazisa enjenge-scuba diving, ukuhamba ngezintaba kanye nokuhamba ngezinyawo. Idolobha laziwa ngokunikeza indawo enhle yokushayela emanzini.
I-Ilhabela (3: 30h) - Itholakala kuphela eSão Sebastião ngesikebhe, iyisiqhingi esinamabhishi ahlukahlukene okonakele kanye nezinketho zomhlaba wezokuvakasha.
IPeruibe (2: 00h) - Idolobha elisogwini oluseningizimu olunamabhishi amahle. Ezindaweni zasemadolobheni, kusatshalaliswa izindawo eziningi zokuvakasha zasolwandle zokwakha okujwayelekile ngokwakhiwa okuvundlile. Eningizimu kutholakala i-Jureia yemvelo enamachibi amaningi agcinwe futhi angatholakali lutho, kanye nemifula eminingi ehlanzekile yamanzi enezimpophoma namachibi emvelo.
ICampos do Jordão (2h) -iyidolobha elincane elijabulisayo ezintabeni, e1,600 m ukuphakama. AbakwaPaulistanos abasale kahle bathenga indlu yabo yasebusika eCampos do Jordao, ngenxa yengxenye yomkhosi womculo wasebusika odumile ngoJulayi, lapho isizini ephezulu iba khona edolobheni. Iningi labanikazi beklabhu kanye nabanikazi be-bar abakhuphukayo benyuka intaba futhi bagqugquzela imicimbi namaqembu ngalesi sikhathi sonyaka.
Indaiatuba (1: 30h) - Izigidi zabantu abayimilutha yendlela yasePolo bebelokhu bewuthanda lo muzi kanye nomakhelwane bawo waseHelvétia. Namuhla, isifunda esasiqala njengekoloni ledlanzana elincane sibamba abantu abasemazingeni aphakeme kakhulu ezinsizakalo zePolo ezizimele emhlabeni.
IHopi Hari (1h) - Ipaki yengqikimba enkulu etholakala edolobheni laseVinhedo, ihora elilodwa ukusuka eSão Paulo. Inika ukugibela okuningi, kusuka kulokho okwenzelwe izingane kuya kokuya ngokugqamile. Ukudla okunhlobonhlobo, kusuka ekudleni okulula ukuya kwinqola yamafutha Ungafika lapho ngemoto noma ngamabhasi we-swtle kusuka ezindaweni eziningi.
I-Wet'n Wild São Paulo (1h), Itupeva (Bheka iVinhedo). Ipaki yamanzi ye-American Wet'n Wild chain, eduzane naseHopi Hari, enama-12 Ukugibela nezitolo eziningi zokudla.